भगवानले हामि सबैको कल्याण गरुँन! – हेर्नुहोस् साउन २७ गते मंगलबारको राशिफल – Bannigadhi Today
भगवानले हामि सबैको कल्याण गरुँन! – हेर्नुहोस् साउन २७ गते मंगलबारको राशिफल
धनराज साउँद २७ श्रावण २०७७, मंगलवार
आज श्री शाके १९४२ बि।स।२०७७ साल श्रावण २७ गते मंगलबार इश्वी सन २०२० अगस्त ११ तारीख भाद्र कृष्णपक्ष सप्तमी तिथी पश्चात अष्टमी तिथी भरणी नक्षत्र गण्ड योग पश्चात वृद्धि योग भद्रा करण चन्द्रंमा मेष राशीमा आनन्दादि योगमा मुसल योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु श्रीकृष्णजन्माष्टमी व्रत, मोहरात्रि, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा ९ज्यो।प।सरोज घिमिरे०
मेष राशि ९चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ० सामान्यकार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । नयाँ मित्रहरुको प्राप्तीले तथा साथसहयोगमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अधुरा कार्यहरु सम्पादन गर्न मातृपक्षको साथ सहयोग आवश्यक रहनेछ । नयाँ लगानिमा भने बिशेष साबधानी अपानाउनु उत्तम रहनेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधारको योग रहेकोछ ।